Home Wararka Somaliland oo si kulul uga jawaabtay hadal kasoo yeeray Mustafa Cagjar
Somaliland oo si kulul uga jawaabtay hadal kasoo yeeray Mustafa Cagjar
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Somaliland, Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir [Faratoon], ayaa ka jawaabay hadal dhowaan kasoo yeeray Madaxwaynaha dowlad degaanka Soomaalida, Mustafa Maxamed Cumar [Cagjar].
Cagjar ayaa sheegay in degaanada Soomaalida ee xuduudka la leh dowlada Itoobiya – si gaar ah Somaliland iyo Jubbaland – ay ku dhuumaaleysanayaa xubno dambiyo kasoo galay shacabka degaanka.
Madaxwaynaha oo hadalkiisa sii wata wuxuu shaaca ka qaaday sidoo kale in shaqsiyaadkiisa ay soo abaabulayaan falal liddi ku ah amniga, isaga oo wacad ku maray inay gacanta kusoo dhigi doonan.
Faratoon oo war-fidiyeenka u waramay oo arrintaasi ka jawaabaya ayaa dhinaca uga leexiyay maamulkiisa, isaga oo xusay inaanu jirin masuuliyiin degaanka kasoo jeedo oo dhulka Somaliland maamusho ku sugan.
Wasiirka ayaa wuxuu su’aal geliyay xaqiiqo ahaanshiyaha hadalka kasoo yeeray Mustafa Cagjar, kaasi oo uu ku tilmaamay “mid ubaahnaan lahaa in la hubiyo kahor inta aanan shacabka lala wadaagin”.
Horaantii sanadkaan ayay ahayd markii uu is-bedalku ka dhacay ismaamulka Soomaali Galbeed, oo ay shaacisay Somaliland inay jiraan wasiiro xuduudka kasoo gudbay, kuwaasi oo kolkii dambe la xiray.
Madaxwayne Muuse Biixi Cabdi, ayaa dhowr jeer faray hay’addaha nabad-gelyadda inay sugaan amniga xuduudka, islamarkaana ay gacan bir ah ku qabtaan xubnaha dhinaca Itoobiya kasoo galaya.
Previous articleIlaaladii Xildhibaan ka tirsan BJFS. oo isku dhiibay kooxda Shabaab (Sawiro)
Next articleSomalia plans to launch its first Int’l bidding for oil exploration next year
DFS oo u dirtay Baladweyne ciidan la dagaala, kana hortaga kacdoonka Hiiraan
Kursigii lakala badashay oo maanta la siiyay Wasiir katirsan Koonfur Galbeed
Sarkaal ka tirsanaa ciidanka Puntland oo lagu dilay magaladda Boosaaso
Taliyihii ururka 6aad ee Gor Gor oo lagu dilay dagaal
Al-shabaab oo goob fagaare ah ku toohtayMas’uul ka tirsanaa Hir-shabeelle